Beydhabo: Shirka amniga Qaranka oo maanta furmaya • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Beydhabo: Shirka amniga Qaranka oo maanta furmaya
Beydhabo: Shirka amniga Qaranka oo maanta furmaya
Magaalada Beydhabo ee caasimad kumeel gaar ah maamulka Koonfur galbeed Soomaaliya waxaa ka socota qaban qaabadii ugu dambeysay ee qabsoomida Shirka Amniga Qaranka oo maanta oo isniinta ah lagu wado in uu ka furmo aqalka madaxtooyada Koonfur galbeed.
Shirkan oo uu furi doono Madaxweyne Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayna khudbado ka jeedin doonaan Madaxda 5-ta maamul goboleed iyo gud gobolka Banaadir,ayaa sida qorshuhu uu yahay ajandayaasha iyo qodobada shirka looga hadli doono waxaa kamid ah amniga, siyaasadda, hanaanka doorashada qof iyo cod ee la filayo in ay dhacdo 2020, wadaaga kheyraadka iyo xoojinta nidaamka federaaleynta dalka iyo arrimo kale oo muhiim u ah dalka.
Habeenimadii xalay ayay madaxda qaranka iyo kuwa maamul goboleedyadu Beydhabo ku yeesheen shirar hordhac u ah shirka guud ee maanta,iyagoona si guud iyo si gaar gaar ah ugu gorfeeyay xaalada guud ee dalka iyo ajandaha ay la tagayaan shirka amniga qaranka ee maanta uga furmaya Beydhabo.
Bishii aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii madaxda maamul goboleedyada dalka shir ay ku yeesheen Baydhabo ay ku sheegeen in aan waxba laga dhaqan gelin qodobadii ka soo baxay shirkii horaantii bishii February ee sanadan lagu soo gaba gabeeyay Muqdisho, iyagoona ku eedeeyay madaxda ugu sareysa dalka in aanay diyaar u ahayn isbedel iyo dhaqan gelin lagu sameeyo qodobada kasoo baxa shirarka qaran.
Hadal heynta ugu badan ee shirka maanta ka furmaya Baydhabo ayaa ah kala fikir duwanaanshiyaha madaxda shirsan iyo sida xaal uu noqon doono maadaama xurguf siyaasadeed ay xiligani u dhexeyso madaxda iskugu tagay Baydhabo ee heer qaran iyo heer maamul goboleed kuwaasoo maanta isku hor fariisanaya ka talinta aayaha dalka iyo ka mari dhalinta dowlad hanata amaanka guud ee dalka.
Wixii warar ah ee kusoo kordha shirka dib ayaan idinkala socod siin donaa insha alah.